China NO.4 Stainless simbi coils gadzira uye fekitari | Huaxiao
Sino Stainless Simbi Kugona nezve NO.4 simbi isina simbi coil
Pedzisa: Kwete 4, # 4, N4
Firimu: PVC, PE, PI, Laser PVC
Kushanda nezve NO.4 simbi isina simbi coil
NO.4 simbi isina simbi coil inoshandiswa zvakanyanya muelevator, escalator, kicheni uye yekugezera ware
Tsananguro yakajairika pamusoro yesimbi isina kukwenenzverwa kana kukwesha
Yakagezwa isina simbi pamusoro yakaita kunge fenicha yekugadzirwa, iyi ingori simbi yekugadzira simbi. Surface ndeye matte, nyatso tarisa kumusoro kwekuteedzera kwemavara, asi haigone kubata. Kupfuura yakajairika inopenya simbi isina simbi inopfeka, inotaridzika zvakanyanya pagiredhi.
Yakagezwa isina simbi pamusoro panoda kuve yakachena
Bhurashi kana kukwenenzverwa kugadzira kuchaita kuti iyo simbi isina simbi ukobvu hutete zvishoma, kazhinji mu0.05 ~ 0.1mm. Uye zvakare, nekuda kwemuviri wemunhu, kunyanya muchindwe une girizi rine simba uye ziya rekubuda, simbi isina simbi yakakweshwa pamusoro inowanzo siya zvigunwe zvemunwe mushure mekubatwa neruoko kana muviri wemunhu, kunyanya muchindwe une girizi rakasimba uye ziya rekubika. , saka kazhinji inoda yakachena panguva.
Mhando nzira yeku Brush kana kukwenenzvera NO.4 simbi isina kupera kupera
Parizvino brashi isina simbi inosanganisira pazasi nzira: kukuya kwemafuta, kuomesa kwakaomarara, kukuya mvura, kukuya kwemafuta nemhedzisiro, uye kutaridzika kwevanhu kugutsikana, panguva iyi ndiyo inodhura
Enzanisa nezve NO.4 HL uye NO.8 simbi isina waya yekukwesha kana kukuya
Isimbi isina simbi yakakweshwa coil kana jira chinhu chakajairika zvigadzirwa pamusika, pane akawanda mapfupi kana marefu mutsara akafukidza iyo yakazara simbi isina simbi coil kana pepa. Iyo 8K girazi pamusoro ndiyo yakafanana maitiro segirazi regirazi. Stainless simbi yakakweshwa ndiyo mhedzisiro yematte bhandi kugadzira, iko kugadzirisa kuri nyore uye kuchikurumidza. Asi iyo 8K girazi pamusoro inoda zvinopfuura mapoka masere zvishandiso, yekutanga jecha rakakora, uyezve ndokubvisa mafungu emutsara wetsvo uye mamwe akateedzana mashandiro ekupedzisa girazi mhedzisiro, girazi rakanyanya kuomarara, uye mhando zvakare vamwe vakasiyana nefekitori yakasiyana
Pashure: 430 inopisa inopisa yakakunguridzirwa simbi isina simbi
Zvadaro: BA isina simbi coil